Ihe ọ bụla I Kwesịrị Aboutmara Banyere Pregabalin - Buyaas
Na-aga n'ihu (148553-50-8) bụ ọgwụ a na-erekarị n'okpuru aha akara Lyrica na mpaghara dị iche iche n'ụwa. Ọ bụ ọgwụ mgbochi apịtị na-akpọkwa ọgwụ anticonvulsant. A na-eji ọgwụ ahụ agwọlata ihe ụbụrụ na-eduga na ọdụdụ. N'aka nke ọzọ, Pregabalin na-emetụta kemịkalụ ụbụrụ nke na-eziga akara mgbu n'ofe akwara ahụ. A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe na ahụike ụwa iji gwọọ mgbu dị iche iche nke ọrịa dị iche iche dịka mgbu akwara nke fibromyalgia, ọrịa shuga, na ọbụna mgbu mgbu.
Enwere ike iji Pregabalin (148553-50-8) na ọgwụ ndị ọzọ iji nyere aka n'ịgwọ ọrịa ọdịdọ na ụmụaka gbara afọ anọ ma ọ dịkarịa ala afọ anọ. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ụwa ahụike, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ọgwụ ndị nwere ike ịkwụsị mgbu na ahịa. Ekwesịrị ị takenụ ọgwụ a naanị n'okpuru ọgwụ dọkịta maka nsonaazụ ka mma. Agbanyeghị, jide n'aka na ị ga-enweta Pregabalin n'aka onye na-ere ahịa ma ọ bụ ndị nrụpụta gburugburu gị.
Na United States of America, akwadoro Pregabalin maka ojiji a na-agwọ ọrịa dị ka;
N'ebe a, usoro ọgwụgwọ Pregabalin mbụ bụ 165mg kwesịrị iwere otu ugboro kwa ụbọchị, a na-atụ aro ka ị were ya mgbe nri ụtụtụ gasịrị. Enwere kwa ohere ime ka onodu ogwu a bukwuo ibu rue 330mg n'ime izu izizi nke usoro onunu ogwu. Mgbe izu abụọ ma ọ bụ izu ole ọ medicationụrụ ọgwụ ma ọ nweghị ọganihu dị ukwuu na ihe mgbu ahụ dọkịta gị nwere ike iwelie onunu ogwu ka nke kacha nke 660mgs kwa ụbọchị. Mgbe ị na-agbanye ya, were ụtụtụ nke mbụ maka ịhapụ ozugbo wee bido ọgwụ a na-ewepụtakarị mgbe ị gachara nri mgbede.
N'ebe a, a na-ewere 75mg ugboro abụọ n'ụbọchị ma enwere ike idozi ya na 150mg ugboro abụọ n'ụbọchị n'ime izu mbụ nke usoro ị doụ ọgwụ. Enwere ike ịbawanye usoro onunu ogwu ya karie ka 225mg ka ewere ya ugboro abụọ kwa ubochi. Usoro kachasị maka fibromyalgia bụ 450mgs yana usoro ọgwụgwọ mmezi nke ihe dị ka 300mg ruo 450mg. N'aka nke ozo, ihe omumu gosiputara na iwere 600mgs kwa ubochi adighi enye otutu uzo Pregabalin kama o nwere ike ibute oria ojoo.
Fewbọchị ole na ole mbụ usoro ị givesụ ọgwụ na-enye dọkịta gị ohere inyocha ọganihu gị tupu ị na-ekpebi ma ịhazighatụ usoro ọgwụgwọ ahụ gbadaa elu ma ọ bụ karịa. Mmụta emere gosiri na ịkwesịrị ịtụ anya nsonaazụ n'ime ụbọchị ole na ole ị. Ewe. Pregabalin bụ ọgwụ na - eme ngwa ngwa, yabụ ị ga - atụ anya ka ahụ belata ihe mgbu ahụ tupu ụbọchị ole na ole amalite ị ofụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị nweghị ahụike ọ bụla n’etiti izu mbụ ị ofụ ọgwụ gị, gwa dọkịta gị ka ọ gbanwee usoro ịchọrọ ya maka nsonaazụ ka mma. Ahụ mmadụ dị iche, ọ bụghị na-akpaghị aka na ị ga-enweta nsonaazụ ngwa ngwa dịka ndị ọzọ ga-eme. Ọzọkwa dabere n'ọnọdụ ị na-a medicationụ ọgwụ maka, nsonaazụ ya ga-adị iche. Offọdụ na-ahụkarị Pregabalin rụpụtara gụnyere;
Ihe nzuzo n’ilepụta nsonaazụ Pregabalin bụ ịgụnye dọkịta gị na usoro usoro ọgwụgwọ niile. Edozila usoro ogwu Pregabalin n’agwaghị gị ọgwụ. Ihe ị nwere ike ịzụrụ ọgwụ ahụ ngwa ahịa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche, ebidola were ya na ị gaghị achọ nyocha ahụike. Ọgwụ a nwere ike ime ka ihe mgbu kwụsị site na ebumnuche dịgasị iche. Fọdụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa Pregabalin iji chịkwaa mgbu akwara, yana mgbu azụ, nke a na-ahụkarị n'ihi arụ ọrụ na asọmpi siri ike.
Dịka ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ dị n'ahịa taa, Pregabalin nwekwara ike ekpughe gị oke mmetụta dị njọ ma ọ bụrụ na ị doụbiga ya ókè. Otutu ndi Pregabalin mmetụta dị ka arụmọrụ site na iji ya eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe usoro ahụ gị metụtara ọgwụ ọjọọ. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji bụrụ ihe amamihe dị na ịmalite mgbe ị na-a doụ obere ọgwụ, nke enwere ike idozi echiche gị mgbe ị nyochachara ahụ gị si anabata ọgwụ. Effectsfọdụ nsonaazụ Pregabalin kachasị na-agụnye;
Ozi ọma ahụ bụ na enwere ike ịchịkwa nsonaazụ ndị a Pregabalin ma ọ bụrụ na ị gwa dọkịta gị n'oge ọ bụ ezie na ụfọdụ ọnọdụ ga-apụ n'anya oge ị ga-enweta mmetụta dị elu ndị a kpọtụrụ aha n'elu anaghị aga n'ihu ị theụ ọgwụ ahụ na-akọghị ọgwụ gị. Dọkịta gị nwere ike ikpebi ịkwụsị ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ a na - achịkwaghị achịkwa ma ọ bụ na - atụ aro ụzọ ọzọ, dị nchebe maka gị.
Ị nwere ike mfe zụta Pregabalin ntụ ntụ na nnukwu ma ọ bụ ezuru gị maka usoro usoro onunu ogwu gị site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche ma ọ bụ ụlọ ahịa ọgwụ kacha nso ebe ọ bụ na ọ dabara n'iwu n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Dọkịta gị ga-abụkwa ezigbo mmadụ iji gosi gị ebe ị ga-azụta ya. Nke a na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịzụrụ ma jiri ọgwụ a na - enweghị atụ egwu nke imebi iwu.
N'ileghachi anya na nyocha Pregabalin dị iche iche, o doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ nwere afọ ojuju maka nsonaazụ ha na-enweta mgbe ha takingụsịrị ọgwụ. A na-ejikarị Pregabalin dịka ọgwụ na-egbu mgbu, ọ na-enwetakwa nzaghachi dị mma site na ọtụtụ ndị ọrụ. Ndị ọrụ nyocha ahụike enwetala nchoputa dị iche iche, ọ bụ ya mere FDA ji kwado ya ka e jiri ya na ọgwụgwọ Akwụkwụ, Post-herpetic neuralgia ma ọ bụ ihe mgbu na-eme mgbe azụ, ọrịa ụkwara akwara neuropathy na Fibromyalgia.
Iswa na-agbanwe, taa, ị nwere ike zụta Pregabalin ntụ ntụ n'ịntanetị na ikpo okwu anyị n'ọnụ ọnụ ego dị ọnụ ala. Weebụsaịtị anyị dị mma-enyi na enyi, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmegharị site n’otu ngwaahịa gaa na nke ọzọ ma mekwa iwu gị n’ime sekọnd. Nwere ike ịnweta weebụsaịtị anyị site na ama ama gị, mbadamba, ma ọ bụ na laptọọpụ gị. N'elu nke a, anyị na-ebuga ngwaahịa gafee ụwa na n'ime ntakịrị obere oge enwere ike. You nwere ike ịzụta Pregabalin n'ọtụtụ ma ọ bụ ọbụna zuru ezu maka usoro usoro onunu ogwu gị.
Anyị bụ ndị na - eduga ndị na - ebunye Pregabalin na mpaghara a, ọnụ ahịa ndị anyị na - akwụ ụgwọ anaghị emebi ogo ngwaahịa anyị. Anyị na-enye ngwaahịa ọgwụ dị iche iche dị mma na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị. Agbanyeghị, anyị na-adụ ndị ahịa anyị ọdụ oge niile ka ha hụ na ha nyochachara ọgwụ tupu ha amalite iwepụta ngwaahịa anyị. Ngwaahịa ọgwụ anyị nwere ike ibute nsonaazụ mgbe ejiri ya ma ọ bụ jụọ ya karịa. Pregabalin maka ire ere A na - enweta ya n’ụlọ ahịa ọgwụ dị nso mana jide n'aka na ị ga - enweta ya n'aka onye na - ere ahịa a tụkwasịrị obi. Ọ bụghị ụlọ ahịa ọgwụ dị n'ịntanetị ma ọ bụ nke anụ ahụ na-enye ngwaahịa dị mma.
Agbanyeghị, akwadoro Pregabalin (148553-50-8) maka ọgwụgwọ nke nchegbu na US, ọ bụ ezie na enwere akụkọ na ụfọdụ ndị ọrụ na-eji ya aha akara iji chịkwaa ọnọdụ ahụ. N'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa dịka na Europe, a nakweere Pregabalin na ọgwụgwọ nke nchegbu na ndị okenye. Enwekwara akụkọ a na-ekwetaghị na o nwere ike iji Pregabalin mee ihe iji kwụsị ịda mbà n'obi. Maka ama ndị ọzọ gbasara Pregabalin, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ kpọtụrụ onye na-ere ọgwụ gị.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Njirimara nke ọgwụ na ọgwụ iji mee ihe n’etiti ndị ọrịa fibromyalgia ndị amitriptyline ọhụrụ nyere, duloxetine, gabapentin, ma ọ bụ pregabalin. Nlekọta anya na nnyocha ogbu na nkwonkwo, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin na pregabalin maka ihe mgbu — amụbaala maka ịkọ ihe kpatara? New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Ịdị irè nke Pregabalin na nnukwu ihe mgbu postoperative n'okpuru usoro ịwa ahụ dị iche iche: nyocha nke meta. Medicine, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin maka ọgwụgwọ nke oke ụjọ mgbakasị: mmelite. Ọrịa Neuropsychiatric na ọgwụgwọ, 9, 883.